အမြန်လမ်းမှာ ကားပျက်တာကို မကူညီတဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ပြီးငွေပါတောင်းတဲ့ ရဲ(၂)ဦးကို အရေးယူပြီ.. – ရွှေအလင်း
အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်. ၃၁၁/၃ အနီးတွင်. မော်တော်ယာဉ် ပျက်ရ်ျ အခြားယာဉ်တစီးဖြင့်. ဆွဲလာသည်ကို. အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ ဝင်(၂) ဦးမှ ထိုသို့ယာဉ်ဆွဲ ယူခြင်းသည် အမြန်လမ်းမကြီး ဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် နှင့် ငွေဒဏ် ၁၅၀၀၀၀/ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်ဟု.
ခြိမ်းခြောက်ရ်ျ. ယာဉ်မောင်း(၂) ဦးထံမှ ငွေ(၄၀၀၀၀/) ကျပ် တောင်းယူ ကြောင်း. လူမှုကွန်ယက် Facebook တွင် Acc အချို့ မှ ယနေ့ဇူလိုင်လ(၁၆) ရက်နေ့ ဖြန့်ဝေ တင်ပြနေသည်ကို တွေ့ ရှိရပါသည်အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်သည်. ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ် သာဖြစ်ပြီး. အဆိုပါ တပ်ဖွဲ့ ဝင်(၂)ဦးအား တပ်ဖွဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းနှင့်အညီ စစ်ဆေးရ်ျ အချုပ်ပြစ်ဒဏ် အရေးယူပြီးဖြစ်ပါသည်
သို့ သော်. ထို ဖြစ်စဉ်ကို. ယခု ဖြစ်သကဲ့သို့ပြည်သူအများစိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်
Source- အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
အမွနျလမျးမကွီး မိုငျတိုငျ. ၃၁၁/၃ အနီးတှငျ. မျောတျောယာဉျ ပကျြရျြ အခွားယာဉျတစီးဖွငျ့. ဆှဲလာသညျကို. အမွနျလမျးမကွီးရဲတပျဖှဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျ(၂) ဦးမှ ထိုသို့ ယာဉျဆှဲ ယူခွငျးသညျ အမွနျလမျးမကွီး ဥပဒအေရ ထောငျဒဏျ နှငျ့ ငှဒေဏျ ၁၅၀၀၀၀/ ကပျြ ပေးဆောငျရမညျဟု.
ခွိမျးခွောကျရျြ. ယာဉျမောငျး(၂) ဦးထံမှ ငှေ(၄၀၀၀၀/) ကပျြ တောငျးယူ ကွောငျး. လူမှုကှနျယကျ Facebook တှငျ Acc အခြို့မှ ယနေ့ ဇူလိုငျလ(၁၆) ရကျနဖွေ့နျ့ဝေ တငျပွနသေညျကို တှရှေိ့ရပါသညျအဆိုပါ ဖွဈစဉျသညျ. ၂၀၁၇ ခုနှဈက ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ဖွဈစဉျ သာဖွဈပွီး. အဆိုပါ တပျဖှဲ့ဝငျ(၂)ဦးအား တပျဖှဲ့ ဥပဒစေညျးကမျးနှငျ့အညီ စဈဆေးရျြ အခြုပျပွဈဒဏျ အရေးယူပွီးဖွဈပါသညျ
သို့သျော. ထို ဖွဈစဉျကို. ယခု ဖွဈသကဲ့သို့ ပွညျသူအမြားစိတျ အနှောငျ့အယှကျဖွဈစရေနျ ဓါတျပုံမြားနှငျ့တကှ ဖျောပွလကျြရှိကွောငျး ရှငျးလငျးဖျောပွအပျပါသညျ
Source- အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး
ဒီတောဝက်လေး ၁၃ ကောင် ထဲက ဘယ်သူ အရင်ဆုံး အပြင်ထွက်လာမှာလဲ ?
မုန့်ဟင်းခါးရောင်းချပြီး အသက်မွေးနေရသူ ဖြိုးမြတ်အောင်မိခင် ကပြောပြလာတဲ့...
ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ...